Xog: Maxay tahay sababta Xilka looga qaaday Taliyaha Ciidanka Nabadgalyadda Wadooyinka, Gen Cali Gaab,? – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 On Jul 24, 2017
Taliyihii Ciidamada Nabadgalyadda Wadooyinka ee Taraafiko, Jen Cali Xirsi (Cali Gaab) ayaa maanta xil ka qaadis lagu sameeyay, saddex bil kaddib markii xilkaas dib loogu magacaabay. Waxayna Xog ku heshay Hornafrik in Taliyaha Xilka looga qaaday Taleefoon, taasoo ah dhaqan ku cusub Habka Dawliga. iyadoona Gen Saacid-Taliyaha Booliska Soomaaliyeed uu Taleefoonka ugu sheegay Cali Gaab inuu xilka ka qaaday xilli uu ku guda jiray Hawlo Kormeer oo uu ku samaynayay Wadooyinka Muqdisho.
Maxay tahay Sababta looga qaaday Xilka Cali Gaab,?
Hornafrik waxay ogaatay in Gen Cali Gaab xilka looga qaaday Waraysi uu siiyay Iddaacada Dalsan ee Muqdisho, kaasoo uu kaga hadlay Shilalka ay gaystaan Gaadiidka AMISOM iyo khasaaraha ka dhashay. Wuxuuna Waraysigaas ku sheegay Taliyuhu in AMISOM aysan mararka qaarkood ka baxsadaan Goob ay Shilka ka gaystaan.
Yaa lagu badalay Gen Cali Gaab,?
Taliyaha Ciidamada Ilaalada Waddooyinka ayaa waxaa mar kale dib loogu magacaabay G/sare Cali Maxamed Cali oo howlo caafimaad ugu maqnaa dalka Hindiya afartii bil ee la soo dhaafay.
Dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ayaa lixdii bilood ee ay jirtay sameysay xil ka qaadistii ugu badneyd, iyadoo todobaadkan ay dhaceen dhowr xil ka qaadis oo lagu sameeyay xubno ka tirsan Wasaaradaha Xukuumadda.